Soo saaridda Covidien-19 Baarista Kit ee Turkey Shirkadaha Guriga | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSoo saaridda ee Covidien-19 Baarista Kit Domestic Shirkadaha dalka Turkiga
28 / 03 / 2020 GUUD, TURKEY
Covidien soo saarka gudaha ee xirmooyinka ogaanshaha turkiyede Enterprises
ANATOLIS DIAGNOSIS iyo BIOTECHNOLOGY: Soosaarista Tuzla, shirkadda waxay ku ogaaneysaa fayraska corona ee sanballadaha neefsashada aadanaha iyadoo ay la socoto xirmada baarista ee Bosphore Coronavirus (2019-nCoV) oo ay soo saartay. Wax soo saarka shirkadda, oo leh afar dalab patent ah, waa xirmo baarista cudurada ka-hortagga ee ku saleysan PC-waqtiga-dhabta ah. Shirkadda, oo hadda ku iibisa wax ka badan 200 wax soo saar gudaha 50 waddan, waxay leedahay 70 xarumood oo ay R&D oggolaatay. "Wax soo saarka Annual of 1 million imtixaanada soo saarka shirkadda ayaa waxaa loo isticmaalaa in ka badan 80 isbitaalada iyo shaybaarada ee Turkey. Shirkadda, oo soo saartay wax ka badan 200 oo xirmooyin iyo baaritaanno cunto ah, ayaa sidoo kale soo saaray xirmada qalabka baarista coronavirus. Qalabka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' ee hadda la soo saaray ayaa si baaxad leh loogu adeegsaday la dagaallanka cudurrada faafa ee 20 waddan, oo ay ku jiraan Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska.
BIOXENE R&D FARSAMADA: Shirkadda ITU ARI Teknokent Bioeksen waxay soo saartay xirmo loo yaqaan 'pathogen Kit' oo lagu ogaan karo cudurka 'coronavirus' muddo yar gudahood 90 daqiiqo. Shirkadda kaliya ee la shaqeysa Wasaaradda Caafimaadka. Wax soo saarka la sameeyay wuxuu ku jiraa liiska deg-degga ah ee WHO howshana wali waa socota. Waxaa aasaasay iyada oo la kaashanayo shirkadda KOSGEB, shirkaddu waxay tidhi “Ilaa 2014, 32 mashruuc oo kala duwan oo R&D ah ayaa soo saaray 162 alaabo kala duwan oo cilmiga bayoolajiga ah. In 2019 waxay bilaabeen waxyaabaha iibinta Turkey oo dhan. Wasaaradda Caafimaadka ayaa buuxisa baahiyaha aasaasiga ah ee Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga iyo Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta.
Teknolojiyadda DNA ee SENTROMER: Sentromer, oo ah mid ka mid ah shirkadaha soo saara qalabka xirmada baaritaanka COVID-19 waqti gaaban, waa shirkad ITU ARI Technocity. Centromere DNA Technologies, ayaa in ka badan 10 sano ku takhasusay DNA dardaro, falgalka loo baahan yahay Covidien-19 maxaa yeelay, ma aha in Turkey dibadda uga by bixinta sentroplex soo xirmooyinka ogaanayo. Shirkadda, oo billowday inay soo saarto xirmooyin si ay u buuxiso baahiyaha, waxay codsi ka heshaa Canada iyo wadamo kala duwan oo Yurub ah. Shirkadda codsanaysa patent waxay leedahay awood ku filan soo saarida xirmada.
HYBRID BIOTECHNOLOGY: Waxaa la aasaasay 2010 iyadoo la kaashanayo TÜBİTAK, shirkaddu waxay soo saartaa laba nooc oo xirmooyinka baaritaanka ah. Waxay ka shaqeynayaan siideynta 15 xirmo oo xirmo baaritaan oo ay ku shaqeynayaan waqti aad u yar. Kaabayaasha shirkadda ayaa ku filan inay soo saaraan 5-10 milyan oo xirmooyinka tijaabada ah.
NUCLEOG ilaa: Qalabka ogaanshaha ee ay sameysay shirkadda bilowga ah ee la aasaasay 2019 wuxuu ku shaqeeyaa saldhigga PCR. Shirkadda waxay leedahay awood ay ku soo saarto 15 kun oo xirmooyinka tijaabada ah muddo 100 maalmood gudahood.
CUDURKA DHAQANKA: Wuxuu sameynayaa xirmo ogaanshaha COVID-19 oo leh teknolojiyadda PCR.
GUUD EE GENKORD: Wuxuu sameeyay qalab tijaabo ah oo lagu ogaan karo coronavirus-ka gaarka ah ee IgM iyo unugyada difaaca jirka ee IgG muddo 15 daqiiqo ah. Alaabta ayaa diyaar noqon doonta toddobaadyo gudahood. Shirkadda waxay leedahay dalabka rukhsad
DS BIO iyo NANO: Qalabka baarista cudurka Coronex COVID-19 ee ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Ankara ayaa ka shaqeeya saldhigga PCR. Shirkaddu waxay leedahay 2 codsi patent ah.
SHAQADA RTA: Sameeynta xirmo ogaanshaha oo ay iskaashanayaan A1 Yaşam Bilim A.Ş, sheybaarka ayaa sheyga u dhoofiya wadamo kala duwan. Shirkaddu waxay leedahay 4 codsi patent ah.
Tülomsaş Soo saarista Kacaanka Waxay soo saari doontaa Tareenka Xawaaraha Sare ee Degaanka
Erin Diesel Engine oo Soo saaraya Engineka Dhismaha Diesel Domestic
Turkey Direction in shirkadda ayaa la kulmay Company Tareennada Italy
Bursa, oo soo saarta taraagyada, ayaa hadda diyaarinaya wax soo-saarka diyaaradaha
Gaadiidka Basaska Keenaya Tamarta u gaar ah Mugla
Yavuzlar Wagon oo soo saartay Wagons TCDD
Yavuzlar Soo saarista Wagon ee TCDD Go'aanka Go'aanka Flash
Dirinler Makina Diyaarinta Milling Must for Days 1
Isukeeninta Saldhigga Gaarka ah
Shirkadaha waxay awood u yeelan doonaan inay ka shaqeeyaan shabakadda kaabayaasha tareenka qaranka
Marxaladda Labaad ee Marmaray ee lagu sameeyey Shirkadaha Turkiga
Mesciogroup Group of Companies
Shirkadaha Shiinaha ee Dhisaya Tareenka Tareenka ee Tuulada Tallinn-Helsinki
Shirkadaha Caalamiga ah ee Hogaaminaya Waaxyaha Tareenka
5 Narlıdere Üçkuyular İskele Jadwalka Baska
Noqo kan ugu horreeya ee Turkiga ..! Garoomada diyaaradaha waxaa la siin doonaa Shahaadada Covid-19
Madaxwaynaha Topbaş ayaa soo bandhigay taraamka ugu horeeya ee gudaha
Shirkadaha leh Tirada ugu badan ee Haweenka Shaqaaleysiisa R&D